डा.रुपज्योति ससुरालीबाट बहिष्कृत | रुपान्तरण
काठमाडौं । देशको सुप्रसिध्द ज्योति ब्यापारिक घरानाका तीनजना उत्तराधिकारी मध्येका एक डा.रुपज्योतिले आफनै दाजु पदमज्योति र ज्योति परिवारका मित्रहरुलाई दुःख दिएकोमा धेरैले आश्चर्य मानेका छैनन । डा. रुपज्योतिको मारमा पर्नेहरुमा टाढाका पराइभन्दा, नजीकका आफन्तहरु नै बढी रहेको बताउँछन पारिवारिक सूत्रहरु । डा. रुपज्योतिको स्वभाव आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने खालकोछ । उनी धार्मिक अन्धकारमा चुर्लुम्म डुबेका छन ।
बिपश्यना ध्यानका गुरु भनेर कहलिएका डा. रुपज्योति आफूले जति अत्याचार गरेपनि आर्जन गरेको धर्मले आफूलाई कुनैपनि पाप र दुष्कर्मको प्रभावबाट मुक्तराख्ने बताउँछन । उनको कुरा सुन्दा उनी हार्वर्ड बिश्वबिद्यालयबाट ब्यबस्थापन कलामा पीएचडी गरेका डाक्टरहुन कि टुँडिखेलमा दर्दशान्ति तेल बेच्ने चटके ? छुट्याउन गार्‍हो पर्छ ।
रुपान्तरणलाई उपलब्ध जानकारी अनुसार डा. रुपज्योतिले आफनी पत्नी बिना ज्योतिको सहमतिमा बिनाकी आमालाई उनको घरबाट उठाएर आफनो घरमा ल्याए । घरमा हेरबिचार र सुरक्षा हुननसक्ने वहानामा उनलाई जमलमा रहेको डा. रुपज्योतिको घरमा ल्याइएको थियो । त्यतिबेला आमालाई क्यान्सर थियो । चिकित्सकहरुले उनको जीवनको आशा मारी सकेका थिए । आमालाई आफूलाई कहाँ लगिदैछ भन्ने थाहै थिएन । पछि, ती असक्त आमाको ल्याप्चे सही लगाएर उनको न्यूरोडकोे घर तथा सम्पत्ति डा. रुपज्योति आफूले हडप गरे ।
त्यसैगरी, बिनाको सुस्त मनस्थितिको भाइ अरुण तुलाधरलाई पनि अपहरणको शैलिमा घरबाट खोसेर लगे । उनीहरुले भाइको हेरबिचारगर्ने बताएपनि राम्रो रेखदेख हुन नसकेको शंका लागेकोले बिनाज्योतिका जेठो भाइ डा. रुपज्योतिको घरमा भाइलिन गए । त्यसबेला डा. रुपज्योति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफनो प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा अर्थ राज्यमन्त्री थिए ।
सत्ताको मात र अहंकारले डा. रुपज्योतिले आफनै जेठो सालोलाई थुनिदिने धम्की दिए । पछि, डा. रुपज्योतिले जेठो सालोको कुपण्डोलको घरमा रहेको हकबाट बेदखल गर्नखोजे । डा. रुपज्योतिले धम्की दिएपछि उनी डराएर सानेपामा बस्न थाले । उनले पुल्चोक प्रहरी थानामा रिपोर्ट लेखाए । तर, पुलिसले डा. रुपज्योतिको दवावमा आएर त्यसलाइ घरायशी झगडा भनेर पन्छाइ दियो ।
डा. रुपज्योतिले अहिले पनि सुस्त मनस्थितिका अरुणलाई आफनो घरमा बन्दी बनाएर राखेकाछन । अशक्त भाइको हस्ताक्षर र हस्तरेखाको दुरुपयोग गरेर उनले ससुरालीको सम्पत्ति खान खोजेको आरोप जानकारहरुले लगाएका छन । बिनाज्योतिको आमाले आफनो नगद तथा बहुमूल्य जिन्सी सामान ज्योति भवनमा राख्ने गरेकी थिइन । त्यो सम्पत्ति सबै बिनाले जफत गरेको जानकारहरुले बताएका छन । डा.रुपज्योति अहिले पूरै ससुराली खलकबाट बहिष्कृत छन ।